အမေရိကန်ထုတ်အံ့မခန်း စွမ်းရည်မြင့် F-15E များအ ကြောင်း – Burmese.asia
Homepage / News / အမေရိကန်ထုတ်အံ့မခန်း စွမ်းရည်မြင့် F-15E များအ ကြောင်း
အမေရိကန်ထုတ်အံ့မခန်း စွမ်းရည်မြင့် F-15E များအ ကြောင်း
ထို F-15E fighter များသည် F-15 မှ ဆင်းသက်လာသော ထိုင်ခုံ2လုံးပါ အင်ဂျင်2လုံးတပ်4th generation တိုက်‌လေယာဉ်ဖြစ်ပြီး နေ့ည၊ ရာသီဥတုမရွေးစစ်ဆင်နိုင်အောင် ဒီဇိုင်းဆွဲတည်ဆောက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ထိုတိုက်လေယာဉ်များကို MC Donnell Douglas Company က 1980 တွင်စတင်ဒီဇိုင်းဆွဲတည်ဆောက်ထားပြီး 11.12.1986 တွင် ပထမဆုံးအကြိမ်စမ်းသပ်ပျံသန်းခဲ့ပါတယ်။ ထိုF-15E တိုက်လေယာဉ်များ အသုံးမပြုမှီအချိန်ကအမေရိကန်လေတပ်တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသောတိုက်လေယာဉ်များမှာ F-4 Phantom2တိုက်လေယာဉ်များဖြစ်ပါတယ်။
၎င်းတိုက်လေယာဉ်များမှာ သက်တမ်းရင့်နေပြီး နည်းပညာစနစ်များအဆင့်နိမ့်လာတာကြောင့် ၎င်း တိုက်လေယာဉ်များတွင် F-15E တိုက်လေယာဉ်များအစားထိုးအသုံးပြုလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ထို F-15E တိုက်လေယာဉ်များ၏ အရွယ်အစားကိုအရင်ပြောပါရစေ။ထိုတိုက်လေယာဉ်တွေဟာ အလျား – 19.446 မီတာ၊ အတောင်ပံအရှည် – 13.045 မီတာ နှင့်အမြင့် – 5.64 မီတာဖြစ်ပါတယ်။ထိုတိုက်လေယာဉ်၏အလေးချိန်သည် မည်သည့်အရာမှမတင်ဆောင်ထားပါက 31700 ပေါင်လေးပြီး တိုက်လေယာဉ်မှုး2ဦး၊ လေယာဉ်ဆီ၊ အပိုဆီတိုင်ကီ နှင့် လက်နက် အပြည့်တပ်ဆင်ပါက 81000 ပေါင်လေးပါတယ်။
ထိုတိုက်လေယာဉ်တွင် Pratt & Whitney ထုတ် F-100-PW-220 or F-100-PW-229 turbofan engine (2) လုံးတပ်ဆင်ထားပါတယ်။ High altitude မှာဆိုရင် တစ်နာရီကိုအမြန်ဆုံး 2656 kilometers နှုန်းဖြင့် စစ်ဆင်နိုင်ပြီး Low altitude မှာဆိုရင် တစ်နာရီကိုအမြန်ဆုံး 1448 kilometers နှုန်း ဖြင့်‌မောင်းနှင်နိုင်ပါတယ်။
စစ်ဆင်နိုင်မှုအကွာအဝေးက 1272 kilometers ဖြစ်သော်လည်း ဝေဟင်ဆီဖြည့်စနစ်တွေပါတာကြောင့် ဝေဟင်ဆီဖြည့်ပြီး ထို အကွာအဝေးထက် ပိုပြီး စစ်ဆင်နိုင်ပါတယ်။ ထိုဝေဟင်ဆီဖြည့်ရသည့် အပေါက်ကို တိုက်လေယာဉ်၏ ဘယ်ဘက်ခြမ်းမှာထားပါတယ်။လိုအပ်လျှင် လေယာဉ်ဆီ 1800 လီတာ ဝင်ဆံ့သည့် ဆီတိုင်ကီ 1 လုံး ဒါမှမဟုတ် လေယာဉ်ဆီ 2300 လီတာဝင်ဆံ့နိုင်သည့် အပိုဆီတိုင်ကီ3လုံး တပ်ဆင်နိုင်ပါတယ်။တစ်မိနစ်တွင် ပေ 50000 အမြင့်ကိုတက်နိုင်တာကြောင့် စစ်ကစားနိုင်စွမ်းမြင့်သည့် တိုက်လေယာဉ်အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။
ထိုတိုက်လေယာဉ်တွင် Air brake (1) ခုပါရှိပြီး ရှေ့ဘီး (1) လုံး နှင့် နောက်ဘီး (2) လုံး ပါပါတယ်။ထိုတိုက်လေယာဉ်များတွင်1. ပင်မ radar အဖြစ် နေ့ညမရွေးထောက်လှမ်းနိုင်သော AN/APG-70 တပ်ဆင်ထားပါတယ်။ AN/APG-70 radar မှာ တိုက်လေယာဉ်အရွယ်ပစ်မှတ်ကို 195 kilometers အကွာက ထောက်လှမ်းနိုင်ပြီး ဗုံးကြဲလေယာဉ်အရွယ်ပစ်မှတ်ကို 410 kilometers အကွာက ထောက်လှမ်းနိုင်ပါတယ်။ဒါ့အပြင် ဝေဟင်ပစ်မှဝ်တွေသာမက မြေပြင် နှင့်‌ ရေပြင်ပစ်မှတ်တွေကို ထောက်လှမ်းနိုင်ပါတယ်။ ထို radar များ၏နေရာတွင် ပို၍ကောင်းမွန်သော AN/APG-82 V1 radar များဖြင့် အစားထိုးနေပါတယ်။
2.ထိုတိုက်လေယာဉ် တွင် နေ့ညမရွေး အလုပ်လုပ်နိုင်သော AN/ALQ-131 Electronic Counter measure စနစ်၊ AN/ALQ-128 ရေဒါသတိပေးစနစ် ALQ-135 Counter measure စနစ်တွေအပြင် AN/ASQ-236 Radar pod ၊ LANTIRN လေကြောင်းပြစနစ်နှင့် ထောက်လှမ်းရေးစနစ် တွေပါရှိသော pod များ ၊ Sniper Targeting pod များချိတ်ဆွဲသယ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။
ထိုတိုက်လေယာဉ်တွင် Accident ဖြစ်ပါက လေယာဉ်မှုး2ဦးစလုံး လွတ်‌မြောက်နိုင်ရန် ACES2Seats များတပ်ဆင်ထားပါတယ်။ ထိုတိုက်လေယာဉ်တွင် လေယာဉ်မှုးတစ်ဦး နှင့် လက်နက်ဆိုင်ရာအရာရှိတစ်ဦး လိုက်ပါရပါတယ်။ထိုတိုက်လေယာဉ်တွင် တပ်ဆင်နိုင်သော လက်နက်များကိုအရင်ပြောပါရစေ။ ထို F-15E တိုက်လေယာဉ်များတွင် ပင်မလက်နက်အဖြစ် 20 mm ကျည်အတောင့် 500 ပါရှိသော ပြောင်6းခုပါ M61A1 Vulcan cannon ကိုတိုက်လေယာဉ်၏ ညာဘက်ပိုင်းတွင်တပ်ဆင်ထားပါတယ်။
ထိုစက်သေနတ်ဟာ တစ်မိနစ်တွင် ကျည် 4000 မှ 6000 ကြားပစ်ခတ်နိုင်ပြီး 1500 မီတာအကွာထိ‌ရောက်နိုင်ပါတယ်။(ဝေဟင် မှ ဝေဟင်ပစ် missiles များ)1. 22 မှ 85 kilometers သွားနိုင်သည့်AIM-7 Sparrow missile များ၊2. 35.4 kilometers အထိသွားနိုင်သည့် AIM-9 Sidewinder missile များ၊3. 55 မှ 105 kilometers အထိသွားနိုင်သည့် AIM-120 missiles များ၊ ( ဝေဟင် မှ ‌မြေပြင် ဒါမှမဟုတ် ရေပြင်ပစ် missile များ)1. 22 ကီလိုမီဝာာကျော်အထိသွားနိုင်သည့် AGM-65 Maverick missile များ၊2. Over 280 kilometers အထိသွားနိုင်သည့် AGM-84 missile များ၊3. 270 kilometers အထိသွားနိုင်သည့် AGM-84 SLAM-ER missile များ၊4. AGM-130 guided missile များ၊5. AGM-154 missile များ၊6. AGM-158 missile များ
Bomb များ၊ 1. MK-82, MK-84 bombs၊2. GBU-10 (Paveway 2) ,12 (Paveway 2) ,15,24 (Paveway 3) , 27 (Paveway 3) , 28 (Bunker Buster) , 31 JADM , 38 JADM , 54 laser JDAM နှင့် 39 Small Diameter Bomb၊ 3. B-61 or B-83 Nuclear Bomb၊ 4. CBU-87,89,97,103,104,105,107 bombs နှင့်
5. BLU-107 bombs စသည့်လက်နက်များ အတောင်ပံအောက် ဒါမှမဟုတ် တိုက်လေယာဉ်၏ ကိုယ်ထည်အောက်တွင်ပါရှိသော Hardpoint များ၌ တပ်ဆင်၍စစ်ဆင်နိုင်ပါတယ်။ ထို F-15E တိုက်လေယာဉ်တစ်စီးကို အမေရိကန်ဒေါ်လာ 36 million တန်ကြေးရှိပါတယ်။
-မူရင်းထုတ်လုပ်သည့် အမေရိကန် ??တွင် 219 စီးပိုင်ဆိုင်ထားတာ‌ကြောင့် ကမ္ဘာပေါ်တွင်အင်အားအကြီးမားဆုံး F-15E တိုက်လေယာဉ်အုပ်ကြီးကိုပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်။
-ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား ??လေတပ်တွင် 70 စီး တာဝန်ထမ်းဆောင်လျက်ရှိပြီး နောက်ထပ် 84 စီး မှာယူထားပါတယ်။ -အစ္စရေး??လေတပ်တွင် 25 စီးတာဝန်ထမ်းဆောင်လျက်ရှိပါတယ်။-အိမ်နီးချင်းစင်ကာပူ ??လေတပ်တွင် အစီး 40 တာဝန်ထမ်းဆောင်လျက်ရှိပါတယ်။– တောင်ကိုးရီးယား ??လေတပ်တွင် 59 စီးတာဝန်ထမ်းဆောင်လျက်ရှိပါတယ်။- ကာတာ‌??လေတပ်က 36 စီးမှာယူထားပါတယ်။ဖြည့်စွက်ချက် +F-15E ၏ အမည်ပြောင်းလဲသွားပုံအမေရိကန်မှလွဲ၍ ကျန်နိုင်ငံများက အသုံးပြု/မှာယူ သော တိုက်လေယာဉ်များမှာ F-15E fighters များဖြစ်သော်လည်း ထို F-15E အမည်တွင် အနောက်က E ကိုဖြုတ်၍ အသုံးပြုသောနိုင်ငံအမည်၏အစစာလုံးကိုထည့်ပေါင်းကာခေါ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
( F-15SG from Singapore ?? Air Force)(F-15Ks from Republic of Korea ?? Air Force )(F-15I from Israel ?? Air Force )(F-15QA from Orders of Qatar?? Air Force)(F-15S from Saudi Arabia ?? Air Force )ဒါကတော့ အမေရိကန်ထုတ် F-15E fighter အကြောင်း ကျွန်တော်လက်လှမ်းမှီသရွှေ့တင်ပြလိုက်ရပါတယ်။
Previous post ကရင်ပြည်နယ်မှ သူနာပြု ဆရာ၊ဆရာမ ၂၀ ဦး ရန်ကုန်သို့ လာရောက်ပူးပေါင်းမည်
Next post မွေးနေ့လေးကို ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်ရင်းဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့ မင်းသမီးချော ခင်ဝင့်ဝါ